Liverpool oo guul ka heshay kooxda Watford oo marti ugu aheyd garoonka Anfield…+SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Liverpool) 14 Dis 2019. Liverpool ayaa guul ka heshay kooxda Watford oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool.
Daqiiqadii 38-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Maxamed Saalax, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis reer Senegal ee Sadio Mane.
Daqiiqadii 90-aad Maxamed Saalax ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Liverpool, waxaana caawinta goolkan lahaa Divock Origi.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 2-0 ay kaga adkaatay Liverpool kooxda Watford oo marti ugu aheyd garoonka Anfield.
“Liverpool ma ahan kooxda ugu fiican Yurub, sababa la xiriira Manchester City” – Klopp
Kooxda Chelsea oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa kabtanka Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang
Gary Neville oo weerar culus ku qaaday xiddiga reer Argentina ee Ángel Di María